Iimpawu ezibalulekileyo ze-4 kwimbali ye-Geofumadas - Geofumadas
NgoJuni, 2013 egeomates My, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
- Sifanele sibe neblogi ...
Wathi umphathi wam (HM), ngombono wakhe unqanyuliwe kweli hlabathi. Ndaziva ndizisola ngenxa yokuba ndingayazi igama lokuba indoda ye-73 iminyaka ikhankanyile ngaphambi kokukhalazela kwento endikhunileyo yokokuba ndidibanise i-intanethi kumasipala abenza ukugcinwa kwe-cadastral. Ngaphezu kokuthethelela ngendlela yakhe yemvelo yokuchaza indawo ye-25 kwiminyaka ezayo kwaye kutheni wayebonakala ehlala esihlalweni sobukhosi nge-astral version yeqiniso.
Ukudibana kwam ngegama leBlog.
Kwakuqala ukudibana neblog blog ngoSeptemba we-2005 nangona sele ichongiwe iminyaka emininzi kwihlabathi labalobi be-digital-style authors.
Emva koko ndaya kusebenza eGuatemala kwaye apho ndabuyisela le nto kwakhona. Ngelo xesha i-Blogger yayingumxholo ongaphantsi kwengcinezelo, kunye neetemplates ezimbalwa kwiitoni ezikhazimulayo. Kwakungekho lula kum ukuba ndiyiqonde imisebenzi yayo ngenxa yokuba babembalwa, ngobusuku obubini ndaqhutyelwa ngcamango yokuqala yokubhala ngobugcisa beCAD / CAM kwisimboli kuphela se-exorcist endazi.
Kodwa uxinezeleko yokuba iingxoxo ngokwaneleyo akukho nto ukuba abantu abaninzi ukuba babe nomdla ekufundeni, ndamisa daba emva kwexesha izinto ezine edinayo waza waqalisa ukuba bathobele ludandatheko ukuba ashiye ilizwe sisigqibo phantse ngokuqinileyo ukuba ndibuye blog elide. Ngoko ndathatha i-ajenda yam kwaye ndabhala izihloko ze-25 zamabali amfutshane afana nawo anokuhamba kunye nobusuku bam. Yena waqala ukubhala ekhitshini, sikhatshwe waseJamani owayekwazi ukuthetha nje enkosi xa wakhonza iglasi okuse ndandilungiselela imithi cashews ezintsha ndlu inkampani baqesha iinjineli amazwe. Emva koko ndiza kuzama intetho ngesiNgesi kodwa ukuba eyomile iScandinavian yayiza kuthiwa Ngombulelo kwaye yayiza kubuyisa kwi laptop yayo.
Kwaba lula ukuba ukubhala amabali, kwakukho ukwenza kuphela oko wabuza utitshala wesihlanu ukwakheka kwibakala kum, abanye touch zoncwadi iklasi yokubhala zam unyaka wam freshman esikolweni. Yonke eEdeni ngokukhawuleza kangangokuba wabhala mna ibali phantse yonke imihla, kwakuloo nto ilungileyo olwenzekileyo kwiminyaka kamva nangona xa ndabona umhleli ngobuchule ukusebenza Ndaqonda ukuba isimbo inzima, ukuze asenze iphefumlelwe yendalo uluvo lwam. Mhlawumbi ke kuhle ukuba ukwazi kuba amabali bam wafika kwamanzi ibe isangqa elincinane abahlobo ukuba gqitha yaye ngokukodwa belizwe yesikolo zokubhoda apho iminyaka embalwa elivisayo lam ruminated omnye Ndaya, kwakhona kwaye kwakhona kunye ukufika koko uthungelwano zentlalo.
Xa ndiza kumaqaku e-25 ndawushicilela ngokushicilela kwaye ndawususa ukuba ungabhala kwakhona ngaphandle kokuba kube isicelo esithile. Maxa wambi ndazibuyisela kwakhona apha.
Ukuhlangana kwam okuqala nge WordPress
Ndandisoloko ndiloyika i-WordPress, kwakunzima kum ukuba ndihambe nge-wp-config.php edition kwaye ke ndingayazi ukuba ndihambe phi. Ngokuncedwa ngumhlobo waseMexico, ndakwazi ukuyifaka kwaye ndenza amanyathelo am kuqala ngenguqu ye-hybride yezinto ezintsha zobuchwepheshe kunye nokubhuloza kwewebhu. Ndazibhalela amaxesha, amaxesha abanye Serturist y Blogingeniería... ude uFrancoco wambona ukuba wabhala ngokungakumbi kum kwaye phantse ukuba wangilahla.
Yaba nqanaba umdla yobomi bam, ndaphulukana ukoyika isimbo lam CSS apho, ukuba ukuphazamisa .httaccess, ukuba imisebenzi elula PHP kunye nezinye ngoonobumba nakongenayo isibini kweenyanga: header, esecaleni, ephepheni, metatags, CMS, xmlrpc , i-css, i-atom ... uluhlu luphela aluzange luphele.
Ekugqibeleni ndathetha ngeGoogle Earth, ezinye izicelo zeemephu zewebhu, kodwa kwakunzima kum ukuba ndibhalele abaphulaphuli njengabo endandithandayo iminyaka: ICartesia eyayivela kwi-2001 kwaye GabrielOrtiz kwi-2003.
Ngolunye usuku ukusuka ku-2007 Tomás, umdali weCartesia wamemezela ukuba wayemise iiCartesians kwi-WordPress MU, kwaye wonke umntu ofuna ukufumana iblogi kwi-geomatics wamukelwa. Ngelo xesha ndabuyele kwilizwe lam elibolekelwe kwaye ndaqalisa iprojekti ebandakanyeka nombono we-cadastre eneenjongo ezininzi phantsi koomasipala abambeneyo.
Ukukhetha i-Geofumadas njengegama kwakulula. Omnye wabacebisi bam (JJ) wandibiza ngexesha elihle ukuba ndihlale phantsi phambi kwetafile ye-oval kwaye ngexesha lokucoca nge-eraser ibhodi yefomica yathi:
- Woza, masitule ikhofi kunye ne-flavour spatial.
Emva kokwenza izinto ezithile ebhodini, undithumele nombongo wokuguqula umzobo ube yinto esebenzayo kwinkqubo yecadastral. Ndigqibele ukubiza loo mzuzu ukhuthazayo «Geofumar»Kwaye xa bendiqala ukufaka isayithi elaligama.
Ndimele ndinyaniseke ukuba ngelo xesha andizange ndicinge ukuba yiloo nto ndikhoyo ngoku. Iziqalo zazizithoba, abaninzi babemkela isimemo sikaTomas kodwa bambalwa ukunyanzela ukubhala ngokunyamekela. Kwaye kwakungenangqondo ukuba ndibone ukuba ekuqaleni i-url yayingu-galvarezhn.cartesianos.com, njengalowo nawuphi na indawo yokuqala apho umbhali ezama ukuma igama lakhe phambi kwegama; nangona ihloko yayo yayihlala iGeofumadas. Emva kwexesha elithile kwakudingeka ukuba idlulisele kwi-geofumadas.cartesianos.com.
Ukucatshulwa ngamaxesha ambalwa kwiifom zeCartesia zandivuselela nangona ndicelomngeni ngakumbi ukugxekwa ngabathile abadumisa injongo yam enomdla kodwa bebuza umbuzo wam wokungabikho kwamanye amazwe, ukungabi namacala kwimeko kunye nokuqinisekiswa okuncinci. Kubo kufuneka ndizithabathe ngokungakumbi umngeni wokubhalela umhlaba jikelele ngaphandle kokulibala ukuba ndinakho ukulungelelanisa i-UTM, intsapho, abanye abahlobo, intombazana kunye nebhulogi.
Ixesha lenza ukuba izibalo zikhule, i-WordPress yaba nobungane, kunye neeplagi kunye neempendulo apho ukuthokoza kukaTomá kwakungenakwenzeka ukulandelela ngeCartesians. Ndithenga isizinda se geofumadas.com kodwa ndavuma ukushiya iCartesianos, ngakumbi xa ndibulela iCartesia kunokuba iindwendwe ze 45 zindwendwe ekhaya. Nangona kunjalo, ithuba linikezwa xa i-WordPress MU iyakumisela ukuyeka ukuphuhliswa kwayo ukuze ingaphinde iphinde iphinde umzamo weendawo ezininzi ze-WP, apho ndacebisana noMatás ukuba i-Cartesianos yayiya khona.
- Ukuba kuphela wena kunye ne-tux ubhala- Wandixelela
Ngoko ndaqonda ukuba njengemvume yokuya kwiGeofumadas.com.
Iminyaka eyi-6 yadlulela ukuze adibana noTomás. Sathetha imihlathi emide kodwa kwakuhlala njalo malunga nezihloko ezifakwe emacaleni emva kwemigangatho ye-OGC. Kodwa emva kokuhamba ezintathu ukuya eYurophu, zonke iziqhamo zeblogi, ndagqiba kwelokuba ndihambe eSpeyin ukuba ndihlambe iitrato ndize ndivakashele abanye abalandeli.
Kwakuhlekisa ukuba nguyena othetha kakhulu ngeemephu, ndahamba ndafuna ukwazi indlela indlela yokuhamba ngomgwaqo kunye ne-iPad yam ukusebenza ngayo. Umsunguli weCartesia.org wayehleli edeskini yakhe efanelekileyo, egqoke isambatho esibomvu esifudumele kunye neeproppers ezipholileyo ezenza ukuba akhangele nayiphi na into ngaphandle kocebisi. Xa evuka, ndabona ukuba wayede kunokuba ndicinge, ilizwi lakhe alizange lihambe kunye nomongameli okhuselekileyo weeforamu kwizikhundla zakhe eziphambili phambi COITT nangona umoya wakhe wabantu abalungileyo uzingela ngokufanayo umfanekiso kaPeter Parker kwisiqephu seGreen Goblin.
Intombazana ihamba nam apho, anditsho ukuthi wayiholele ngenxa yokuba wayenesiqingatha sentyala eyayikhohlisile; namhlanje Ndicela uxolo ukuxelela kuba silibale ukuba ngefowuni ekupheleni kwetafile de yindlala lachachamba emva phantse ezimbini iiyure bethetha imifanekiso Pleyades, orthorectification nobubanzi ZatocaConnect. Saxolisa ngokokuqala ngqa kwaye saya ekhoneni into ethile yokutya, sabona kwakhona kwaze kwaba yinto esilindele kugcinwa i-dessert kwaye ngeli xesha kwakunguTomas owaxolisa.
-Ngokuthobeka, ndibuhlungu kangakanani. Uthe, ngeentlungu ezininzi. Kodwa le ndoda asizange sixoxe.
-Akunjalo, kubonisa. Uthe watyhila iingcambu zakhe kwi-Cribean Caribbean.
Emva koko sabuyela ekuphinda siphinde siphinde sithethe, sathetha ngabantwana bam abanemifanekiso ekhulile kumanqaku aqingqiweyo eblobhsayithi, nakwakho kuze kube yintlonipho yomsebenzi sabuyela kwi-Infoterra ofisi. Ukuthetha ngendlebe ndakhulula ukuncoma kwindlela yesithathu yokuxolisa kwintombazana eyayiqala ukuthukuthela ngamaphikseli.
-Umele ukwazi ukuba isiqingatha sam impumelelo yam ngenxa kaMatás.
Yaye wayisusa ngekhono le-fencer.
-Yaye xa wayedumile kwaye wayenkulu, washiya iCartesianos.
Ukuhleka kwakufanelekile okwethutyana, sasizinikezana kwaye ndaza ndenza intlungu ngenxa yokutyelela iToledo kunye nentombazana eyayingafuni ukuba sisikhokelo emva kweentsapho ezimbalwa zaseBrazil.
Ndiya kugqiba eli nqaku kuba iinyawo ze-43,000 zigqityiwe kwaye zisicelile ukuba zicime izixhobo zecomputer, ngoko ndiza kugqiba ngokufutshane njengoko kunokwenzeka.
Kodwa ngoku, abantu baye: HM, JJ Thomas, baye ebalulekileyo kwesi siganeko abantu apha nje ushwankathelwa ngamanyathelo elifutshane. Kodwa indlela inde kunye nabantu abaninzi ebalulekileyo ngale blog ndiyazi. Ezinye zazo uhlele mna, abanye ukufunda nje zamaphephandaba, abanye baya ekugqibeleni buya ukuze ubone ukuba ubonakale spike eyaziwa owayo nabanye ukunxibelelana ngokusisigxina nge-skype, email okanye uthungelwano zentlalo.
Ukufumana uhambo lwe-110,000 nyanga zonke libiza indleko eninzi, phantse yonke into kuvavanyo kunye nephutha. Ngethuba ixesha lokufika kwamazwe ngamazwe (eGeomate.com) yiyiphi i-NG yaba yi-psychologist kunye nezonxibelelwano zentlalo ezithintele uxinzelelo ngabaphathi abalulekileyo. Ndiyakholelwa kwidemokhrasi yolwazi abaye baqala phambi kwam; ngoku ndiyayixabisa indlela uGabrielOrtiz kunye neCartesia bamkele ngayo, oku kwaye kwandikhuthaza ukuba ndikhwelise uZ! Izikhala endaweni yokukhuphisana nabathengisi, sebenzisana ngokubambisana.
Ndabona iimbono ezininzi ziza kwaye zihamba, ezinye zilungele ukufa. WordPress kunye gvSIG lubonise ukuba umthombo le modeli ivulekileyo esithembisayo njengoko software obuphuma kwaye kufuneka ukuba alwe naye, naye maxa wambi kuye. Njalo xa ibhulogi entsha ifika negama lombhali we-header, ithemba lam liphinde lizalwe ukuba kwiminyaka ye-6 omnye unokuvakalelwa kukuba uyavuya. Ngokuba siya ukuba siphila kulo ecosystem, senza oluzinzileyo ngakumbi kwiHispanic umxholo geofuma GML kodwa uhlala i charisma ludandatheko, ngokukhuthazwa impumelelo zabanye kwaye ukumelana akukho nokubhuqa neemeko.
Ngoko ujonge. Ukuba ngelinye ilanga uqale iblogi, iforum okanye iphepha, yibuyisele. Ukuba uceba ukuvula enye entsha, phambili kukho indawo yomntu wonke.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-15 akhawunti ye-Twitter ukulandela ... ngonyaka kamva
Post Next Template ukwenza ifayile DXF ukusuka kuluhlu Excel lamanqakuOkulandelayo "
Iimpendulo ze-3 kwi "4 zihlandlo ezibalulekileyo kwimbali yeGeofumadas"
Nibingelele umhlobo uMauricio
Ingcaciso Abadali beCartesia.org gabrielortiz.com kunye georumadas.com singabantu abohlukileyo.
Umsebenzi omkhulu uGabriel.
Mauricio Marquez uthi:
Sawubona uGabriel, ngoku ngoku ndifunda ibali lakho ndibona indlela endiyilandele ngayo yonke into endiyilandelayo ukuba ihambe kunye nam.
Buyela kwi 2005 I saqalisa ukuya kweli ihlabathi elimangalisayo le-GIS, ingakumbi ngokuvela ubugcisa simahla yaye kuba iziganeko intanethi engapheli ngeenxa zonke kum ukuba nam.
Forum Ortiz, Cartesia, gvSIG, Kosmo, njl, njl, kwakukho iindawo apho siyavumelana izihlandlo ezininzi, ke, mna engokoqobo-ihlabathi, ngokunyaniseka andizange ndingathanda ukuchitha ixesha elininzi ehlabathini virtual, namhlanje bathi , kodwa ke, ndicinga ukuba ixesha elide ndiyakwazi ukunikezela le mizila ngenhlonipho kunye nokunyaniseka endihlala ndikunye kuwe nakwii-geofumadas.
Ndicinga phakathi 2007 / 2008 wayefuna ukwenza into efana blog, oku ukuthetha nawe, kodwa wathabatha ubomi benene nam kude ngokupheleleyo, kufuneka eyisingela umsebenzi onzima yokunyamekela umntu okhethekileyo kakhulu, kodwa mna nisamana ngoko ndiyathandabuza phindela ngcamango yokugcina iblogi
Okokugqibela, kumele ukuba kwenziwe ekuqaleni, ndinqwenela kuvuyisana nawe, mna ndiyazi imizamo yakho aye avuzwa kakuhle kwaye ziya kuqhubeka logama nje uyakwazi ukufunda kuwe, Ndiyakhathazeka amaxesha foristas ukuba ngandlel 'bakugxeke, kodwa kakhulu yakho Uyazi kakuhle ukuba ungayisebenzisa njani ukuphucula, namhlanje akungathandabuzeki malunga nokumnandi kukufunda nokulandela amanyathelo akho.
Inkukhu enkulu, evela eVenezuela ...
Sawubona, kusasa ekuseni.
Ndilandele uhambo lwakho ukususela ngexesha leCartesia, xa wena, nabanye nabanye, nisebenzisa iCartesia ukubhala iiblogi zakho.
Ibhulogi yakho ibonakala ibonakala yinto emnandi, ibe yindlela epholileyo kunye neyokuzonwabisa ukuqonda iindaba zentsebenzo yethu.
Ibali endiyifundeyo, ndifumanise lithintela kwaye libonisa ukuba emva kweblogi kukho abantu kwisitrato, kunye nefuthe kunye nokukhohlisa kokubala nokwabelana ngolwazi.
Ndiyakuvuyela yonke le minyaka.